एभिन्युज टेलिभिजनअब नयाँ कानुनमन्त्री को ? हेर्नुहोस् को-को छन् मन्त्री बन्ने दौडमा - एभिन्युज टेलिभिजन %
अब नयाँ कानुनमन्त्री को ? हेर्नुहोस् को-को छन् मन्त्री बन्ने दौडमा
9 Shrawan 2075 Wednesday 10:04 am Comments Off on अब नयाँ कानुनमन्त्री को ? हेर्नुहोस् को-को छन् मन्त्री बन्ने दौडमा
काठमाडौँ : आफ्नो अभिव्यक्ति विवादस्पद बनेपछि कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मंगलबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । तामाङले राजीनामा दिएसँगै अब नयाँ कानुनमन्त्री को बन्ला भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । राजनीतिक वृत्तमा पनि विभिन्न समीकरण जोडेर विश्लेषण थालिएको छ । मन्त्रीका छनोटका लागि नेकपाले औपचारिक प्रक्रिया अघि नबढाए पनि तामाङको राजीनामासँगै अनौपचारिक छलफल भने गरेको छ ।
यसअघि तत्कालीन एमालेबाट मन्त्रीको पहिलो सूचीमा रहेका भानुभक्त ढकाल, वैकल्पिक सूचीमा रहेका कृष्णभक्त पोखरेल र कास्की-१ का खगराज अधिकारी कानुनमन्त्री बन्ने दौडमा छन् ।
तत्कालीन एमालेका सचेतकसमेत रहेका अधिकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै समर्थनमा सचेतक बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने उनी दुर्इ पार्टी एकीकरणपछि भने सचेतक बन्नबाट चिप्लिएका थिए । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका अधिकारी यसपटक पनि मन्त्रीको दौडमा छन् । ओली आफूनिकटलार्इ मन्त्री बनाएर अगाडि बढ्दा आफैं समस्यामा पर्नसक्ने आकलन गरिएको छ ।
यस्तै, तत्कालीन एमालेका प्रमुख सचेतक रहेका ढकाल पार्टीमा पोलिटब्युरो सदस्य, संगठन विभाग उपप्रमुख पनि भइसकेका नेता हुन् । उनलार्इ एमालेले यस निर्वाचनपछि प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिँदा पनि नमानेपछि खगराज अधिकारीलार्इ प्रमुख सचेतक बनाएको थियो । यसअघि पनि उनको नाम मन्त्रीका लागि चर्चामा थियो। तर, मन्त्री बन्न पाएनन् ।
नेपालको संविधान २०७० को मस्यौदाकारसमेत भइसकेका पोखरेलले नेपाल ल क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । कानून राम्ररी बुझेका र लामो समय सोही क्षेत्रमा काम गरेका पोखरेल नेपाल बार एसोसिएसन चितवन शाखाका अध्यक्षसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । रक्षामन्त्री र्इश्वर पोखरेलनिकट मानिने उनको सम्भावना बलियो देखिन्छ ।